कम्बोडियामा प्लेटिनम गहनाको अर्थ के हो? - वैज्ञानिक विश्लेषण
हामीले हाम्रो अध्ययनको दौडान नोट गरेको अनुसार, कम्बोडियामा कुनै वास्तविक प्लेटिनम गहना छैन। कम्बोडियाईहरूले गलत तरीकाले "प्लेटिनम" वा "प्लेटिन" शब्द प्रयोग गर्दछन् जसको निश्चित प्रतिशत सुन रहेको धातुको मिश्रित वर्णन गर्न सकिन्छ।
हामीले विभिन्न शहरहरू र विभिन्न प्रकारका स्टोरहरूमा प्लेटिनम गहनाहरू खरीद गर्‍यौं जुन यो धातु के हो भनेर निश्चित रूपमा निर्धारण गर्न। हामीले उनीहरूको स्पष्टीकरण बुझ्न प्रत्येक विक्रेतालाई पनि ध्यान दिएँ, र यहाँ हामीले पाएका परिणामहरू छन्।
हामीले प्रदान गर्ने तथ्या .्क औसत हुन् र जानकारी सकेसम्म बढी सटीक छ। यद्यपि हाम्रो अन्वेषणको नतीजा सबै ज्वेलर्सका नतीजाहरूसँग मिल्दैन, त्यहाँ अपवाद हुन सक्छ।
वास्तविक प्लेटिनम भनेको के हो?
स्ट्यान्डार्ट प्लेटिनम (नम्बर 3)
प्लेटिनम नम्बर5र 7
प्लेटिनम नम्बर 10
ज्वेलर्सका लागि फाइदा र हानि
गहनाका लागि लाभ
गहनाका लागि हानि
लाभ र ग्राहकहरु को लागी नुकसान
ग्राहकहरूको लागि लाभ
ग्राहकहरुको लागी बेफाइदाहरु
वास्तविक प्लेटिनम एक लस्रस, ड्युस्टाइल, र निन्दनीय, चाँदी-सेतो धातु हो। प्लेटिनम सुन, चाँदी वा तामा भन्दा अधिक द्विगुणित छ, यसैले शुद्ध धातुहरूको सबैभन्दा ductile हो, तर यो सुन भन्दा कम द्वेषयुक्त छ।
प्लेटिनम रासायनिक तत्व हो जुन प्रतीक Pt र आणविक संख्या 78 हो।
अहिलेसम्म हामीले कम्बोडियामा कुनै पनि गहना पसलमा वास्तविक प्लेटिनम गहना फेला पारेका छैनौं। तर यसको मतलब यो होइन कि यो भेट्न असम्भव छ
गोल्ड बनाम प्लेटिनम
कम्बोडियाई मानिसहरु "मीस" भन्ने शब्द केवल शुद्ध सुनको कुरा गर्न प्रयोग गर्दछन्। तर शुद्ध सुन गहना अनुप्रयोगहरूका लागि अत्यन्त नरम छ।
यदि गहनालाई अन्य धातुहरूसँग सुनको मिश्रित मिश्रणले बनाईएको छ भने, यसलाई "मीस" को रूपमा लिदैन, तर "प्लेटिनम" को रूपमा लिइन्छ।
Noone लाई "Platine" को प्रयोगको वास्तविक उत्पत्ति थाहा छ, तर हामी मानौं कि यो फ्रान्सेली शब्द “Plaqué” वा अंग्रेजी शब्द “प्लेट” को व्युत्पन्न हो, जसको अर्थ कम्बोडियामा गहना भनेको बहुमूल्य धातुले ढाकिएको छ। , जबकि त्यहाँ सस्तो धातु छ। हामी मान्दछौं कि समयको साथ अर्थ परिवर्तन भएको थियो।
वास्तवमा, कम्बोडियनहरूले फ्रेन्च उत्पत्तिको नाम "क्रोमा" प्रयोग गरीएको गहनाको बारेमा कुरा गर्छन्।
विक्रेताको स्पष्टीकरणहरू सुन्दै, मानक प्लेटिनम प्लेटिनम नम्बर3हो।3/ 10 सुनको, वा 30% सुनको, वा 300 / 1000 सुनको भन्न खोज्नु भनेको के हो।
वास्तवमा, हाम्रा सबै परीक्षणहरूका परिणामहरू यी गहनाहरूमा 30% सुन भन्दा कम छ, तपाईंले तल देख्नुभयो, औसत 25.73% छ। यो बिभिन्न स्टोरहरू बीच केहि प्रतिशतले फरक हुन सक्दछ, र प्राय: प्रतिशत समान स्टोरबाट गहनाका लागि पनि फरक हुन्छ।
द्वारा परीक्षण गरिएको: Energy Dispersive X-Ray फ्लुरोसेन्स (EDXRF)
यदि हामी यी संख्याहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमा तुलना गर्छौं, यसको मतलब यो 6K सुन वा 250 / 1000 सुन हो
धातुको यो गुण अन्य देशहरूमा अवस्थित छैन, किनकि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको रूपमा प्रयोग गरिएको सुनको न्यूनतम रकम 37.5% वा 9K वा 375 / 1000 हो।
विक्रेताको स्पष्टीकरणहरू सुन्दै:
प्लेटिनम नम्बर5मतलब5/ 10 सुनको, वा 50%, वा 500 / 1000 मान्नु पर्छ।
प्लेटिनम नम्बर7मतलब7/ 10 सुनको, वा 70%, वा 700 / 1000 मान्नु पर्छ।
तर परिणाम फरक छ
नम्बर5को लागी, परिणाम यसको हुनु भन्दा कम हो, तर यो स्वीकार्य छ, तथापि, भिन्नता संख्या7को लागी स्पष्ट छ।
5 र7बीचको सुनको प्रतिशत समान छ, तर धातुको रंग फरक छ। वास्तवमा, तामा, चाँदी र जिंकको अनुपातहरू परिवर्तन गरेर धातुको रंग परिवर्तन हुन्छ।
प्लेटिनम नम्बर5र7को लागी डिमान्ड कम छ। गहना शायद कम्बोडिया मा मानकीकृत उत्पादनहरु को रूप मा कम नै बेचिएको छ। यो प्राय: यसलाई अर्डर गर्न आवश्यक हुन्छ ताकि गहनाहरू विशेष गरी ग्राहकको लागि गहना डिजाइन गर्दछन्।
प्लेटिनम नम्बर 10 शुद्ध सुन हो, किनकि यो 10 / 10 सुनको मानिन्छ, वा 100% सुनको, वा 1000 / 1000 सुनको।
तर वास्तवमा प्लेटिनम नम्बर १० अवस्थित छैन किनभने त्यस अवस्थामा शुद्ध सुनलाई "मीस" नाम दिइएको छ।
कम्बोडिया बनाम अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड
अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको तुलनामा कम्बोडियन प्लेटिनम रातो सुनसँग दाँज्न सकिन्छ। मिश्र धातुमा ठूलो मात्रामा तामा हुन्छ। यो सुन बनाउनको लागि सस्तो तरीका पनि हो, किनकि तामा सुनको धातुमा प्रयोग हुने धातुहरूको तुलनामा सस्तो हुन्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको पहेंलो सुनमा कम्तीमा तामा भने रातो सुनभन्दा चाँदीको धेरै हुन्छ।
गुलाब सुन पहेलो सुन र रातो सुनको बिचको मध्यस्थता हो, त्यसैले यसले पहेंलो सुन भन्दा बढी तामा, तर रातो सुन भन्दा कम तामा समावेश गर्दछ।
निम्नलिखित जानकारी एक अर्काबाट अर्को पसलमा भिन्न हुन सक्दछ।
यस्तो देखिन्छ कि केही कम्बोडियाका जेवेलहरू सचेत छन् कि उनीहरूको मिश्र खराब गुणवत्ताको हो र त्यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरू पनि छन्।
हामीले "मीस बराrang", "मीस इटाली", "प्लेटिन १ 18" को बारेमा सुनेका थियौं।
यी सबै नामहरूको फरक अर्थ हुन सक्छ। र विक्रेताहरु को एक अलग स्पष्टीकरण छ।
"मीस बराrang" भनेको विदेशी सुन हो
"मीस इटाली" भनेको इटालियन सुन हो
"प्लेटिन १ 18" को अर्थ १K के सुन हुन्छ
तर हामीले सुनेका यी नामहरूले कहिलेकाँहि धातुको गुणस्तर वर्णन गर्दछन्, कहिले काहिं गहनाको कामको गुणस्तर। प्लेटिनम नम्बर १ number को लागि, अन्य नम्बरहरूको तुलनामा यसले कुनै अर्थ राख्दैन किनकि यसको मतलब यो १ 18०% शुद्ध सुन हो।
प्लेटिनम गहना व्यापार
कम्बोडियामा बैंकिंग प्रणाली नयाँ छ। कम्बोडियाका मानिसहरूले परम्परागत रूपमा आफ्नो पैसालाई दीर्घकालीन लगानीको रूपमा घर जग्गामा लगानी गर्थे। र तिनीहरूले गहनाहरू छोटो वा मध्यम अवधिको रूपमा खरीद गर्दछन् तिनीहरूको अनावश्यक पैसा खर्च गर्नबाट जोगिन।
अवश्य पनि, धेरै जसो मानिससँग केहि पनि लगानी गर्न बजेट हुँदैन, तर उनीहरूसँग थोरै बचत भएको पैसा भएपछि तिनीहरूले प्लैटिनम बँगुले, हार वा औंठी किन्छन्।
सामान्यतया, प्रत्येक परिवार एकै स्टोरमा जान्छन् किनकि उनीहरूले मालिकलाई विश्वास गर्छन्।
धेरै व्यक्तिहरू आफूले के खरीद गरिरहेको छन् बुझ्दैनन् तर उनीहरूले वास्तवमा ख्याल राख्दैनन् किनकि तिनीहरू जान्न चाहने दुईवटा सूचनाहरू हुन्:
यो कति तट हो?
गहनाको कत्तिको गहना फिर्ता किन्न सकिन्छ जब उनीहरूलाई पैसा चाहिन्छ?
औसतन, गहनाले आफ्नो मूल मूल्यको लगभग 85% को लागि मानक प्लेटिनम गहना फिर्ता खरीद गर्दछ। यो स्टोर द्वारा फरक हुन सक्छ
ग्राहकले नगदमार्फत तत्काल भुक्तानी गर्नको लागि इनभ्वाइसका साथ गहनाहरू फिर्ता ल्याउनु पर्छ।
यो राम्रो लगानी हो। समान वस्तुमा धेरै पटक पैसा कमाउन सजिलो छ
ग्राहकहरू वफादार छन् किनकि उनीहरू आफ्नो गहना कम्बोडियामा अर्को स्टोरमा बेच्न सक्दैनन्
ग्राहकहरूको गहना फिर्ता किन्नको लागि हातमा धेरै पैसा चाहिन्छ। यो खतरनाक छ र चोरहरूलाई आकर्षित गर्न सक्छ। विशेष गरी बिदाको अघि जब सबै ग्राहकहरू एकै समयमा आउँदछन् किनभने तिनीहरूलाई तिनीहरूको प्रान्त जान पैसा चाहिन्छ।
कडा र दैनिक काम किनभने मालिक आफैले आफैंले स्टोर व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ। कुनै कामदारहरू यो कामको लागि योग्य छैनन्
फिर्ता पैसा प्राप्त गर्न सजिलो
एक विशेषज्ञ हुन आवश्यक छैन
तपाइँ पैसा फिर्ता गर्नुहुन्छ जब तपाइँ यसलाई फिर्ता बेच्नुहुन्छ
यदि तपाईंले चलानी हराउनु भयो भने, तपाईंले सबै चीज हराउनु भयो
तपाईं यसलाई अर्को पसलमा बेच्न सक्नुहुन्न
सबै चीजहरू राम्रोसँग चल्दछन् जबसम्म स्टोर खुला छ। तर यदि पसल बन्द भयो भने, अब के हुन्छ?
कहाँ खमेर प्लैटिनम किन्न?
तपाईंले यसलाई जताततै फेला पार्नुहुनेछ, कम्बोडियाको राज्यको कुनै पनि शहरको कुनै बजारमा।
के हामी खमेर प्लैटिनम बिक्री गर्छौं?
हामी केवल प्राकृतिक रत्न र बहुमूल्य धातु बेच्दछौं अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमा प्रमाणित।
हामी कुनै पनि बहुमूल्य धातु, र कुनै पनि गुणको वास्तविक प्लेटिनम सहित तपाईंको कस्टम गहना डिजाइन गर्न र बनाउन पनि प्रस्ताव गर्छौं।
हामी आशावादी छौं कि हाम्रो अध्ययन तपाईंलाई सहयोगी छ।
तपाईंलाई हाम्रो स्टोरमा छिट्टै भेट्ने आशा गर्दैछु।